Nebulizer mask, Oxygen mask, Nasal oxygen oxygen - Bornsun
Iyo yekukweva system inopa yakachengeteka uye yakavimbika fluid kuunganidza mune ese mashandiro uye nzvimbo dzehutano hutano nzvimbo. suction mabhegi anowanikwa mu1000ml uye 2000ml saizi. Izvo zvakagadzirwa neyakaonda asi yakasimba polyethylene firimu, ichiita kuti iyo system ive yakachengeteka, yehutsanana uye yakasimba.
Nasal Oxygen Cannula-yakapfava Zano
Tracheotomy Mask Rudzi
Trachea Cannula Rudzi
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd. inobata mune zvekurapa zvekutsvaga, kugadzira uye kushambadzira. R & D timu rinotungamirwa naMD uye main mainjiniya anonamira kumusika-anotarisisa, sainzi uye tekinoroji segwara, inogara ichigadzira zvigadzirwa zvepamusoro. sangana nezvinodiwa zvakakosha zvekufema, anesthesiology uye vanachiremba vechimbichimbi.